Taariikhda Saldanadahii xukumi jiray Hobyo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Taariikhda Saldanadahii xukumi jiray Hobyo
January 24, 2018 admin5204
#Hobyo Xaruntii #Ganacsiga ee #Geeska Africa (Taariikhda #Saldanadahii xukumi jiray Hobyo)
Magaalada Hobyo waa magaalo xeebeed Qadiimi ah oo dhacda dhinaca waqooyi beri ee gobolka Mudug ee Somalia, magaca Hobyo waxaa loogu bixiyay biyaheeda oo aad u dhow iyo ceelasha ku yaal magaalada iyo dhulka ku xeeran oo caan ku ah biyo macaan oo nadiif ah.
Taariikh ahaan magaalada Hobyo waxay ahayd meel muhiim u ah dadka Muslimiinta ee ku noolaa #Geeska Africa iyo guud ahaan Qaaradda Africa marka ay Aadayaan magaalada Barakeysan ee #Makka si ay u soo xajiyaan, ayadoo Hobyo u ahayd meel ay ka boqoolaan #XujeydaMuslimiinta ah.
Sidoo kale, Taariikhyahanada Carabta ayaa sheega in Hobyo mar ay ahayd xarun #Ganacsi oo #Soomaalida ay lahayd oo Ganacsiga isaga kala goosha Daafaha Caalamka, gaar ahaan Taariikhyahanada ayaa sheega in Hobyo ay ahayd xarunta Ganacsiga ee Boqortooyadii Ajuuraan oo inta badan Dhulka Somalida ka talineysan qarniyadii 13-17aad.
Saldanadan Soomaaliyeed ayaa badeecadaha kala duwan iyo dalagyada Dalka Soomaaliya ka dhoofin jirtay magaalada Hobyo, kuwaasoo loo iib-geyn jiray dalalka Caalamka Sida India, China, iyo Egypt. Tusaale ahaan Sawirka 2aad waa sawir gacmeed Muujinaya Gari Dowladda China ay ka soo iibsatay boqortooyada Ajuuraan ee Dalka Somalia qarnigii 16aad, oo doontii sidday ay ka tagtay xeebta Hobyo.
Magaala Xeebeedka #Hobyo ayaa la dhihi karaa waxay ahayd Magaalo muhiim ah siyaasad ahaan iyo Ganacsi ahaan qarniyadii 13-17aad iyo waliba qarnigii 18aad oo ay maamulka la wareegtay Saldanadii #Hiraab oo ayada Jabisay Saladanadii Ajuuraan.
Xiliyadaas Saldanada Ajuuraan waxaa ku furnaa dagaalo qaraar oo ay kala hortagayeen Gumeystihii Boortaqiiska gaar ahaan magaalooyinka Baraabe iyo Mombasa oo ka mid ahayd xiligaas dhulweynaha Somaliya.
Sida ku qoran Buugaagta Taariikhda ee Giriiga, Turkia iyo China maamulka magaalada Ganacsiga ee Hobyo aakhirka qarnigii 17aad waxaa la wareegay Saldanadii Hiraab ka dib markii beelaha #Habargidir, #Abgaal, #Duduble iyo #Shiiqaal dagaal faraha loogu gubtay ay la galeen Boqortooyada #Ajuuraan, taasoo keentay inay Hobyo ka dhisaan #Saldanadii Hiraab oo imaam loogu dhigay Beesha #Mudulood.
Raad-Raaca Taariikheed ee la hayo ayaa sheegaya Saladnadihii #Ajuuraan iyo #Hiraab ee isaga dambeeyay magaalada Hobyo inay ka dhigeen magaalo xiriir fiican la lahayd beesha caalamka ayadoo laga dhoofin jiray Xoolaha nool, Maqaarka, Alwaaxda, Foolka maroodiga iyo Dalagyada beeraha ee ka soo go’a dhulka Soomaaliya.
Dhamaadkii qarnigii 19aad beelaha Hiraab ayaa khilaaf so dhexgalay taasoo sababtay Awooda Saldanadii Hiraab in ay hoos udhacdo, Sidoo kale magaala xeebeedka #Hobyo ayaa gacanta Saladanadii Hiraab ka baxday ka dib markii Suldaan Yuusuf Cali Kenadid oo ka soo goostay Boqortooyadii Cismaan maxamuud ee #Majeerteen ayaa magaalada Hobyo la wareegay sanadii 1870s isagoo halkaas ka dhisay Saldanadii Hobyo.
Sida ku cad taariikhda Soomaaliya Saldanadii Hobyo ee Kenadid waxay raacday Raadkii Saldanadahi ka horeeyay, waxayna Tusmeysay sida Strategy u tahay magaalada Hobyo. Saldanada Hobyo ee reer Kenadid ayaa bilaabay inay xiriir fiican oo ganacsi ay la sameeyaan Dalalka Cumaan iyo Saldanadii Zanzibar.
Muddo ka dib, Hogaamiye Guuleed Faarax Jeex ayaa gacanta Hiraab dib ugu soo celiyay magaalada Hiraab ka dib markii dagaal ba’an uu ku qaaday Saldanadii Kenadid ee xukumeysay magaala xeebeedka Hobyo.
Taariikhdaas fog iyo Xadaaradahaasi ayaa soo maray magaalada Hobyo, sidaasi darteed waxaan dhihi lahaa #Hobyo waa magaalo Strategy ah oo u baahan in dadkeeda Soomaaliyeed ay maalgashadaan kuna soo celiyaan kaalintii ay ku lahayd dhulweynaha Soomaaliya, waxaa hubaal ah inay ka faaideysanayaan malaayiin Soomaali ah hadii la dhiso dekadeeda islamarkaasina loo yeelo wadooyin laami ah oo taga magaalooyinka muhiimka ah.